Ra'isalwasaaraha Britain oo u jeediyey digniin rabshadwadayaasha London (Sawiro) – SBC
Ra'isalwasaaraha Britain oo u jeediyey digniin rabshadwadayaasha London (Sawiro)
Posted by editor on Agoosto 9, 2011 Comments
Ra’isalwasaaraha Britian David Cameron ayaa wacad ku marey in uu gacan bir ah xukuumadiisu ku qaban doonto kuwa ka dambeeya rabshadaha boobka & fawdada ku saleysan ee ka oogan magaalada London ee caasimada UK.
Isagoo soo gaabiyey sodcaal tamashle ah oo uu uga maqnaa wadanka UK dibadiisa ayuu shir saxaafadeed uu ku qabtey kadinka hore ee xafiiskiisa No 10 Dawning Street wuxuu Mr Cameron ku goodiyey in la ciqaabi doono oo la cabsiin doono miraha ay abuurteen qaswadayaasha rabshadaha & bililiqada ka geystey sadexdii maalmood ee la soo dhaafay magaalada London.;
Cameron wuxuu sheegay in ciidamo gaarayo 16 kun oo askari oo Booliis ah lagu daadin doono wadooyinka magaalada London si ay u xakeemeeyaan rabshad wadayaasha waji gabaxa & sumcad xumada u keenay xukuumadiisa & haykalkii booliiska UK.
Mr Cameron wuxuu ku dhawaaqay in Baarlamanka UK ay yeelan doonaan kulan deg deg ah maalinimada khamiista si ay uga wadahadlana xaaladan rabshadaha ka aloosan London.
Rabshaduhu kuma ekaan oo kaliya magaalada London waxay kaloo u talaabeen magaalooyinka Birmingham, Liverpool, Bristol & Manchester halkaasi oo laga soo wariyey iska horimaadyo booliisku la galeen rabshadwadayaasha boob dukaamo & goobo ganacsi oo kale ayaa la soo wariyey.
Magaalada Birmingham waxaa ka dhacdey mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ka dib markii isbaaro ay ka bilaabatey magaaalda oo dadka dharka laga siibanayey wadooyinka dharaar cad, iyadoo caamirooyinku qabteen nin dhalinyaro ah oo dharkii & kabihii laga siibtey.